Dowladda Uganda oo Ciidamo horleh leh u soo direysa Somalia | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Dowladda Uganda oo Ciidamo horleh leh u soo direysa Somalia
Dowladda Uganda ayaa 160 askari oo boolis ah u soo diri doonta Soomaaliya Bisha December ee sanadkaan si ay uga qeyb noqdaan howlgalka nabad ilaalinta ee Soomaaliya, sida ay sheegeen mas’uuliyiin katirsan dowladda dalkaas.
Saraakiisha iyo Askarta Uganda ayaa dhameystay tababar socday muddo lix bilood ah oo loogu diyaar garoobayay in loo keeno Soomaaliya sidii ay uga mid noqon lahaayeen howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya ee (AMISOM), sida uu sheegay booliska.
“Soomaaliya gudaheeda, saraakiishu waxay ilaalin doonaan kala dambeynta dadweynaha, ilaalinta shaqaalaha Midowga Afrika (AU) , waxayna taageeri doonaan hawlgallada bilayska ee u baahan jawaab celin la sameeyo ayaa lagu yiri” War kasoo baxay Booliska Uganda.
Saraakiisha, intii uu tababarku ka socday waxaa qiimeyn ku sameeyay koox ka kooban shan sarkaal oo ka tirsan Qiimeynta Booliiska oo uu hoggaaminayo Figalo Maxime oo ka socda Xarunta AMISOM,” ayay booliisku shaaciyeen.
Kooxda loo soo dirayo Soomaaliya waxay qayb ka yihiin Unugyada Booliiska ee Formed -ka ah ee ka tirsan Midowga Afrika, kuwaas oo sanad walba meerto noqda. Hawlgalkan soo socda ayaa calaamad u noqon doona wareegii tobnaad ee cutubyada booliska Uganda ee Soomaaliya.
Uganda ayaa billowday inay ciidamo booliis ah keento Soomaaliya bishii July ee sannadkii 2012 -kii kaddib markii la keenay Soomaaliya ciidamada difaaca Uganda (UPDF) sannadkii 2007 -dii.
Toban sano ka dib markii Al Shabaab laga saaray Muqdisho, dowladdu waxay maamushaa qayb yar oo dalka ka mid ah, iyadoo gacan ka heleysa ilaa 20,000 oo askari oo ka socda Amisom, hayeeshee aysan weli ku guuleysan amniga dalka.
Dowladda Ugands waxaa Soomaaliya kajooga kumanaan Askari oo ku howlgalla Magaca AMISOM, kuwaas oo ku sugan qaar kamid ah Gobolada dalka si ay ula dagaalamaan Al-Shabaab.